धर्मको जन्म र खस जाति - punhill.com
२७ कार्तिक २०७८, शनिबार २०:३४ मा प्रकाशित (6 महिना अघि)
नेपालको सबभन्दा ठूलो जाति खस एउटा त्यस्तो समुदाय हो जसले आफ्नो मौलिकता पूर्णरुपमा गुमाइसकेको छ । आफ्ना परम्पराहरु बिर्सेको छ । चालचलन र रीतिस्थिति गुमाइसकेको छ । संस्कार संस्कृति छोडिसकेको छ । धर्म पनि बिर्सिसकेको छ । विकासको नाममा भाषाको पुरानो स्वरुप गुमाइसकेको छ । मौलिक भाषा पूर्णरुपमा विस्थापित हुने दिशातिर उन्मूख छ । लामो समय युरोपको उपनिवेश बनेका दक्षिण अमेरिकी र अफ्रिकी मुलुकका अधिकांश भाषा संस्कृतिहरु मेटिएका छन् । धर्म परम्पराहरु लोप भएका छन् । नेपालका खसहरुको अवस्था पनि त्यो भन्दा भिन्न छैन । जनसून्य भूगोल देश बन्दैन । देश भनेको भूगोल मात्र होइन । त्यसअर्थमा नेपाल देशको एउटा महत्वपूर्ण तत्व खस जाति पनि हो । खस जाति आफै एउटा देश पनि हो । खस नामको देश वर्षौवर्षदेखि औपनिवेशिक शासन अन्तर्गत शासित रहँदै आएको छ । देश मुक्त भएर पनि खस जाति सांस्कृतिक उपनिवेशबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।
पचासको दशकमा चलेको माओवादी आन्दोलनले नेपालका जनजाति, मधेसी, महिला, उपेक्षित उत्पीडित क्षेत्र र वर्गमा पहिचानको चेतना सम्प्रेषण गरेको थियो । विडम्बना नै भन्नुपर्छ त्यो आन्दोलनले नेपालको खस जातिलाई जगाउन सकेन । खस समाजमा जातिचेतना राउटे समुदायको भन्दा पनि कमजोर भैसकेको रहेछ । त्यसैले हिमाल, पहाड, तराईमा बसोबास गर्ने ससाना जातिसमुदायहरुले पहिचानको खोजी गरिरहँदा खस नामको विशाल डाइनासोर मस्त निद्रामा थियो । नयाँ संविधानले खस जातिलाई आर्यसंग जोडिदिएपछि बल्ल खस जाति अलिकता झस्केको हो । तैपनि त्यो प्रपञ्च गलत हो, त्यसले बाँकी बचेको खस जातिको अस्तित्व समाप्त पार्छ भन्ने खसहरुको संख्या निकै सानो छ । ठूलो संख्या अहिले पनि मदहोस छ । निश्चिन्त छ ।
अर्धचेतन अवस्थामा रहेको खस समाजलाई कुम्भकर्णे निद्राबाट जगाउने चेष्टा आसन्न जनगणनालाई प्रस्थानविन्दु बनाउने कोसिस खस अभियानले गर्न थालेको छ । त्यसैले सानो मधुरो आवाजमा जनगणनामा आफ्नो जाति खस लेखाउन आह्वान गर्दै आएको छ । त्यो मधुरो आवाज सबै खसहरुको कानसम्म पुगिसकेको छैन । कानमा परेर पनि वास्ता नगर्ने खसहरुको संख्या निकै ठूलो छ । गणना फारममा खस लेखाउने हिम्मत गर्लान् नगर्लान् “म खस रहेछु” भन्ने जानकारी भने धेरै खसहरुलाई भएको छ । पुरोहित वर्गबाट खस अभियानको विरोध भए पनि कैयौं ब्राह्मण विद्वानहरुले आफू खस समुदायकै सदस्य भएको स्वीकार्छन् । तिनले पनि जनगणनामा खस जातिको रुपमा आफूलाई उभ्याउने हिम्मत गर्लान् नगर्लान् ? परिणामले बताउने छ ।
सर्वप्रथम जाति र धर्मबीचको अन्तर्संम्बन्धको बारेमा अलिकता स्पष्ट हुने कोसिस गरौं । धर्म र जाति एउटै कुरा होइन । बुद्ध धर्मका प्रणेता शाक्यवंशी गौतम बुद्ध थिए । बुद्ध धर्मले एशियाभर आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको छ । शाक्यमुनि सिद्धार्थले स्थापित गरेको धर्मज्ञान शाक्य जातिमा सीमित छैन । विश्व जनसंख्याको ३७ प्रतिशत क्रिश्चियन धर्ममा आबद्ध छ भनिन्छ । उक्त धर्मका प्रणेता जिजस क्राइष्ट यहुदी थिए । इजरायली थिए । जाति र देशको सानो घेरा तोडेर क्रिश्चियानिटी संसारभर फैलिएको छ । त्यसैले जाति र धर्म एउटै होइन, एकै ठाउँमा एकैसाथ बस्दैनन् । धर्म परिवर्तनीय हुन्छ । जाति भनेको धेरैथोरै वंशसंग सम्बन्धित हुन्छ । त्यसैले धर्म हिन्दू हुँदैमा जाति पनि हिन्दू हुन्छ भन्ने बुझाई अज्ञानता हो । हिन्दू एउटा जातिको रुपमा विकसित भएको छैन । हिन्दू धर्म मान्ने अनेकौं जाति हुन सक्छन् । त्यसमध्येको एउटा खस हो । जातिमा खस लेखाउँदैमा हिन्दू धर्मबाट च्यूत भइन्छ भन्ने बुझाई गलत हो ।
खस जन्मजात न हिन्दू थियो न बौद्ध थियो । ती धर्महरु लिनुपूर्व पनि उसको आफ्रनै धर्म संस्कृति हुँदो हो । मानव समाजमा समयान्तरमा हजारौं धर्मको जन्म भएको छ र हजारौं धर्म मासिएका छन् । बुद्ध धर्म मान्नुपूर्व खस जातिको धर्म के थियो त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । खस जातिको लेख्य इतिहास उति समृद्ध छैन । तर अलिकता गहिरिएर हेर्ने हो भने त्यो प्रश्नको उत्तर हामीसंगै छ । जातिले हिन्दू धर्म मानोस् वा बुद्ध, खसहरुले मष्टो पुज्न छोडेका छैनन् । मष्टो संस्कृति खस समाजमा जीवित छ । करिब ७ सय वर्षसम्म विभिन्न धर्मसंस्कृति अवलम्बन गरेपनि मष्टो मान्न छोडेको छैन । खस जातिको मौलिक धर्म संस्कृतिको यो एउटा जबर्जस्त र बलियो प्रमाण हो ।
मष्टो पूजन एउटा प्रकृति पूजनको परम्परा हो । मष्टोका नामहरु मूलतः पहाड पर्वतसँग सम्बन्धित छन् । मानव समाजले स्थापित गरेका रीतिस्थिति, परम्पराहरु संस्कारमा बदलिए । संस्कार संस्कृतिमा रुपान्तर भयो । मष्टोपूजन संस्कृति हो । अहिले संसारमा रहेका ठूला धर्म सम्प्रदायहरुको जन्मपूर्व मानव जातिका विभिन्न समूहहरुले आ आफ्नै संस्कृतिको विकास गरेका थिए । तिनैलाई प्राकृत धर्म भनिएको हो । मष्टो संस्कृति पनि प्राकृत धर्म हो । आफ्नो संस्कृति जोगाएर पनि अर्को धर्म लिने परम्परा मानव समाजमा देखिन्छ । खस जातिले गरेको त्यही हो । खोलो हिँडेको ठाउँमा चिसो रहन्छ भनेजस्तो एउटा उदाहराण हो “मष्टो मान्यता” ।
धर्म वास्तवमै के हो त भनेर बहस गर्नुभन्दा पहिले धर्मको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने कुरामा स्पष्ट हुँदा धर्म लिने छोड्ने वा मान्ने कुरा सहज लाग्ने छ ।
खासगरेर क्रिश्चियानिटी, इस्लाम, बुद्ध, हिन्दू जस्ता ठूला धर्महरुमा धर्मको उत्पत्ति इश्वरद्वारा भएको हो भनिएको हुन्छ । त्यो सरासर झुटो कुरा हो । मानव विकासको इतिहासको अध्ययन गर्दा अधिकतम १५÷२० हजार वर्षभन्दा उता मानवले भाषा, लिपी र समाज विकास गरेको प्रमाण फेला पर्दैन । गुफा मानवकालीन समाजकाल आधुनिक समाजभन्दा निकै लामो समय रहेको देखिन्छ । आजभन्दा ८० हजारदेखि १ लाख ३० हजार वर्षपूर्वसम्म मानिस गुफामा बस्थ्यो, ढुङ्गाको हतियार र औजारहरु प्रयोग गथ्र्यो भन्ने कुरा पुरातात्विक प्रमाणहरुले पुष्टि गरेका छन् । त्यो लामो कालखण्डमा मानिसले देवपूजन गरेको प्रमाण फेला पर्दैन । मानव विकासको निकै पछिल्लो चरणमा मात्र धर्मको विकास भएको हो ।
धर्म मानव विकासको सह उत्पादन हो । इश्वरप्रदत्त होइन । मानिसले कहिले कुन सन्दर्भमा धर्मको विकास गरेको हो त ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न मानव विकासका चरणहरुको गहिराइसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । संक्षेपमै भए पनि त्यो इतिहासको पत्रहरु केलाउने कोसिस गरौं । मानव जातिको पशुपालन युगको घुमन्ते अभ्यास कृषियुगमा पदार्पण गरेपछि अन्त भयो । गाई भैसी., भेडा बाख्रा चराउँदै वनवन भौतारिने मानव जाति खेती गर्न जाने पछि एकै ठाउँमा बस्न वाध्य भयो । अन्नबालीले आज रोपेर भोलि नै फल दिदैनथ्यो । कमसेकम कमसेकम ३÷४ महिना कुर्नुपर्ने नै भो । जनावर वा अर्को मानव समूहबाट आफ्नो खेतीबालीको रक्षा पनि गर्नुप¥यो । त्यसैले खेती लगाएदेखि उकेर्ने बेलासम्म एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने वाध्यताले मान्छेलाई स्थायी घरबास बनाउन उत्प्रेरित गरेको हो । बाली सुरक्षाका लागि समूह बनाएर बस्नुपर्ने भएकोले समाजको विकास भयो ।
प्रारम्भमा खेती समूहले गथ्र्यो । कृषि उत्पादन साझा हुन्थ्यो । भण्डारबाट जसलाई जति चाहिन्छ त्यति लिन्थ्यो । तेरो मेरो भन्ने संकिर्णता जन्मेको थिएन । सबै मालिक हुन्थे, सबै ज्यामी हुन्थे । समाज विकासकै क्रममा परिवार जन्म्यो । विवाह पद्धतिको विकास भयो । परिवार अलग बस्न थाल्यो । प्रत्येक परिवारको अलग अलग आवश्यकता विकसित भए । तैपनि खेतिबारीको अंशबण्डा भएको थिएन । सगोलमै खेती गरिन्थ्यो । सगोलमै उपभोग गरिन्थ्यो । सगोलमा काम गर्दा केही कामचोर समूह पनि हुन्थे । तिनले काममा ठग्थे । जब परिवार अलग बस्न थाल्यो, निजी सम्पत्तिको अवधारणा विकास भयो । आफ्नो परिवारको आवश्यकता अनुसारको उत्पादन गर्न थाल्यो । जमिन बाँडियो । अलग अलग उत्पादन गर्ने परम्परा बसेपछि कामचोरहरु मर्कामा परे । अल्छीले जान्ने दैवले जान्दैन भनिन्छ । त्यो कामचोर समूहले फेरि पनि ठगेर खाने जुक्ति निकाल्यो । समाज र सम्पत्तिको रक्षाको जिम्मेवारी आफूले लिने त्यसवापत उनहिरुको भरणपोषणको दायित्व समाजले उठाउनुपर्ने सर्त राख्यो । समाजलाई पनि शान्ति सुरक्षा र झैझगडाको मध्यस्तता गर्ने मानिसको खाँचो थियो । कामचोर समूहको सर्त समाजले स्वीका¥यो । यसरी समाजको सुरक्षावापत कुत तिर्ने व्यवस्थाको जन्म भयो । त्यसैको विकसित रुप समान्ती राज्यकालको राज्यसत्ता हो ।
समाजमा अरु पनि त्यस्ता ठग तत्वहरु थिए । त्यसमध्येका अर्को थियो पुजारी । मानिसले देवताको सिर्जना गरिसकेको थियो । रोगव्याधीलाई श्राप, पाप र कोपको परिणाम मान्ने परम्परा बसिसकेको थियो । पचासवर्ष अघिसम्म हाम्रो समाजले विफरलाई माईको प्रकोप मान्थ्यो । प्रकोपबाट बच्न माईपूजा गर्ने गरिन्थ्यो । आदिम मानव समाजले अभ्यास गर्दे आएको एउटा मान्यताको अवशेष थियो माईपूजा । पूजा त गर्नै पथ्र्यो । पूजा परम्पराको ज्ञान राख्ने मानिसले पनि मुखियाले जस्तै प्रस्ताव समाजसमक्ष राख्यो । अर्थात सबै मानिसको पूजाआजाको ठेक्का पुजारीले लिइदिएवापत उसको भरणपोषण समाजले गरिदिनुपर्ने भो । प्रारम्भमा पुजारीले वैद्य र धामीको काम पनि गथ्र्यो । पुजारीको परिवार बढदै गएपछि पेशाको विशिष्टिकरण भयो । पुजारी, वैद्य र धामी अलग अलग भए । दैवी श्राप र मानिसले जानअनजानमा आफैले गरेको पापकर्मवापत रोग लाग्छ र देवतालाई मनाउन सकियो भने निको हुन्छ भन्ने आदि मान्यता धर्मको आदिम रुप थियो ।
धर्म स्वेच्छिक विषय हो । विश्वास हुनेले मान्दा हुन्छ । विश्वास नलाग्नेले नमान्दा हुन्छ । फलानो मुलुकको मान्छेले यो धर्म मान्नुपर्छ, तिलानो मुलुकको मानिसले त्यो धर्म मान्नुपर्छ वा यो जातिले त्यो धर्म मान्नुपर्छ, त्यो जातिले यो धर्म मान्नुपर्छ भन्ने हुदैन । । तर धर्म सापेक्ष राज्यहरु आज पनि अस्तित्वमा छन् । धर्मबाट निर्देशित शासन चलाउने अभ्यास गरिदै छन् । हो, कुनै जमानामा धर्मगुरु र राज्य मिलेर शासन चलाउँथे । कुनै जमाना त यस्तो पनि थियो, राज्य नै धर्मले चलाउँथ्यो । समाज विकासको त्यही चरणको धङधङीबाट मानव जाति पूर्णरुपमा मुक्त हुन सकेको छैन । त्यसैले धर्मको डण्डा चलाएर राज्य सञ्चालन गर्ने अभ्यास जारी छ । समयले त्यो रोग एकदिन निको पारिदिने छ र मानव जाति धर्मको कहरबाट मुक्त हुनेछ ।
मंगलबार देशैभरी सार्वजनिक विदा
आज नयाँ वर्ष २०७९ शुभारम्भ
पुलाश्रममा असुर राजा रावणको मुर्तिसहित पार्क वन्दै
बेनीमा थकाली समुदायको ‘तोरनल्ह’ पर्व
होली पर्वका नाममा जथाभावी गरे पक्राउ गर्न आदेश
कालीगण्डकी धमिलाे बन्न थाल्याे मुस्ताङी घर फर्कदै